1 ။ အဆိုပါ site ၏တင်ပြချက်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုအတွက်62004 ဇွန်လကနေဥပဒေအမှတ် 575-21 ၏ဆောင်းပါး 2004 လက်အောက်တွင်ပြုလုပ်က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ် www.comme-un-pro.fr ယင်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၏တစိတ်တဒေသအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောကာယကံရှင်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာ:
တာဝန်ယူထုတ်ဝေ : Tranquillus -tranquillus.france@comm-un-pro.fr
အိမ်ရှင် : WP ဆာဗာ ပြင်သစ်ဥပဒေအရယူရို ၁၀၀၀၀ ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော SARL ကုမ္ပဏီသည်တရား ၀ င်မန်နေဂျာ Fabrice Ducarme မှကိုယ်စားပြုထားသောနံပါတ် ၈၀၈ ၈၄၀ ၄၇၄ အရ VAT rue de la Cité Foulc 10000 Nîmesတွင်နေထိုင်သူအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည်။
2 ။ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းန်ဆောင်မှုများ၏စည်းမျဉ်းများ။
အဆိုပါ site ၏အသုံးပြုမှု comme-un-pro.fr အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေား၏အပြည့်အဝလက်ခံမှုဆိုလို။ အသုံးပြုမှုဤဝေါဟာရများကိုမည်သည့်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်စေခြင်းငှါ, ထို site ၏အသုံးပြုသူများကိုမှန်မှန်သူတို့ကိုတိုင်ပင်ဖို့အကြံပေးကြပါတယ်။
ဆိုက် comme-un-pro.fr ဖြစ်နိုင်သမျှယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တိကျသောသတင်းအချက်အလက်သေချာစေရန်၎င်း၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာရှိသမျှတို့ကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်အမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်မှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အင်တာနက်အသုံးပြုသူသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာပေးသောသူ၏သတင်းအချက်အလက်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ရမည်၊
ကွတ်ကီး : comme-un-pro.fr ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်ကြော်ငြာများ၊ စာရင်းအင်းနှင့်ပြသရန်အတွက် cookies များကိုလက်ခံရန်သင့်အားတောင်းဆိုနိုင်သည်။ cookie ဆိုသည်မှာသင်ကြည့်ရှုနေသောဆိုက်၏ဆာဗာမှသင့် hard drive ပေါ်တွင်တင်ထားသောသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဆာဗာမှသတင်းအချက်အလက်များကိုဖတ်ရန်နှင့်သိမ်းဆည်းရန်အသုံးပြုသည့်ရိုးရိုးစာသားဖိုင်တစ်ခုတွင်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည့်အချက်အလက်များစွာပါ ၀ င်သည်။ ဒီ site ၏အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများသည် cookies များကိုလက်ခံခြင်းမရှိပဲအလုပ်လုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောကွတ်ကီးများကိုပယ်ဖျက်ရန်အဓိက browser (ဘရောက်ဆာ) ၏သတင်းအချက်အလက်စာမျက်နှာမှာဤတွင်ပါ။
hyperlinks: Comme-un-pro.fr အခြားသော website များသို့မဟုတ်အခြားအင်တာနက်ကိုအရင်းအမြစ်များလင့်များပူဇော်စေနိုင်သည်။ Comme-un-pro.fr ထိုကဲ့သို့သောပြင်ပအင်တာနက်ဆိုက်များတွင်သို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များရရှိမှုတုံ့ပြန်နိုင်, မအာမခံချက်မပေးပါဘူး။ ဒါဟာသူတို့ပူဇော်သတင်းအချက်အလက်, ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအပါအဝင်ဤဆိုဒ်များသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များအကြောင်းအရာကနေဖြစ်ပေါ်လာသမျှသောစကားတို့ကိုဆိုသဘာဝတရား၏ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ယူကျင်းပ, ဒါမှမဟုတ်လုပ်စေခြင်းငှါမဆိုသုံးစွဲခြင်းမရနိုငျ ဤအ element တွေ။ ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အန္တရာယ်များကိုလုံးဝအသုံးသူတို့ရဲ့အခြေအနေများလိုက်နာရမည်သူအသုံးပြုသူမှာဖြစ်ရလိမ့်မည်။
accessiblity: ဆိုက်ကို ယခုနှစ်၏ မတူညီသောအချိန်များတွင် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော်လည်း မရနိုင်တော့ပါ။ ကွာဟမှု၊ အမှားအယွင်း သို့မဟုတ် ချွတ်ယွင်းပုံပေါ်သည်ကို သတိပြုမိပါက ၎င်းကို ကျေးဇူးပြု၍ တိုင်ကြားပါ။ အီးမေးလ်ကလိပ်စာမှာ tranquillus.france@comm-un-pro.fr, ( ... အသုံးပြုသောကွန်ပျူတာနှင့် browser ၏စာမျက်နှာပြဿနာ, အမျိုးအစား) အတိအကျတတ်နိုင်သမျှပြဿနာကိုဖျောပွ။
အားလုံးဒေါင်းလုပ်လုပ်အကြောင်းအရာအသုံးပြုသူများ၏အန္တရာယ်မှာနှင့်သူ၏တစ်ဦးတည်းသောတာဝန်အောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ် comme-un-pro.fr အသုံးပြုသူရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် data ကိုဒေါင်းလုပ်မဆိုအရှုံးအားဖြင့်ခံစားခဲ့ရဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်ကျင်းပရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ထို့အပြင် site ကို user ကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများနှင့်အကို up-to-date ဖြစ်အောင်မကြာသေးခင်က browser ကိုအတူမ, နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြု. site ကိုဝင်ရောက်ဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။
ဤ website ၏အကြောင်းအရာအားလုံးကို comme-un-pro.fr, ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ဂရပ်ဖစ်, ပုံများ, စာသား, ဗီဒီယိုများ, Animation, အသံ, အမှတ်တံဆိပ်များ, GIF များနှင့်အိုင်ကွန်များအပါအဝင်နှင့်သူတို့၏ပုံစံချပေးသည့်အထူးသီးသန့်အိမ်ခြံမြေဆိုက်ကိုများမှာ comme-un-pro.fr အမှတ်တံဆိပ်, အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်အခြားကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်စာရေးသူမှအကြောင်းအရာ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ။
ဤအ element တွေကိုမဆိုမျိုးပွား, ဖြန့်ဖြူး, ပြုပြင်မွမ်းမံ, လိုက်လျောညီထွေ, retransmission သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေရန်တောင်မှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း, တင်းကြပ်စွာ၏ express ကိုရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်မပါဘဲတားမြစ်သည် comme-un-pro.fr။ ဤသည်ကိုယ်စားပြုမှုသို့မဟုတ်မျိုးပွားသမျှသောစကားတို့ကိုဆိုအားဖွငျ့, L.335-2 ဆောင်းပါးများနှင့်အသိပညာဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ကျင့်ထုံး၏အောက်ပါအပြစ်ပေးထားတဲ့ချိုးဖောက်မှုရှိပါသည်။ ဒီတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်းတစ်ခုချိုးဖောက်မှုအရပ်ဖက်နှင့်ရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ်များကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင်ကူးယူ contents တွေကိုပိုင်ရှင်များသင်တို့တဘက်၌ဥပဒေရေးရာအရေးယူဆောင်ကြဉ်းနိုင်ဘူး။
ဇန်နဝါရီလ 78 17 (ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးချင်းစီ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်သြဂုတ်လ6၏ 1978-2004 801 ပညတ်တရားအားဖြင့်ပြင်ဆင်) ဒေတာသက်ဆိုင်သော, ဖိုင်တွေရဲ့62004-ဥပဒေအရ နှင့်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဤ site ကို (ကကြေငြာ၏ဘာသာရပ်ခဲ့သည်2169132 အရေအတွက်ကို) ပညာပေးနှင့်လွတ်လပ်ရေးအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကော်မရှင် (နဲ့အတူwww.cnil.fr).
သို့သော်ဤနိယာမခြွင်းချက်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်စင်စစ်ကြှနျုပျတို့၏ website ကကမ်းလှမ်းအချို့သောန်ဆောင်မှုများအဘို့, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောသင့်အမည်, function ကို, ကုမ္ပဏီအမည်, အီးမေးလိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်အဖြစ်အချို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမေးသော်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောသင်၌, အွန်လိုင်းကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းပုံစံဖြည့်စွက်သည့်အခါအမှုကိစ္စဖြစ်ပါသည် " ထိတှေ့ "။
အားလုံးကိစ္စများတွင်, သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပေးဖို့ငြင်းဆန်နိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျသတင်းလွှာကိုလက်ခံရရှိရန်သတင်းအချက်အလက်တောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်၏အပါအဝင် site ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုမသုံးနိုငျသညျ။
ထိုသို့သောဒေသများအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ၏အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်, သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်သည်အဘယ်သို့လက်လှမ်းသည့်ဝန်ဆောင်မှုများ, လိပ်စာ: အခါသင်အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ရိုးရှင်းသောအညွှန်း, ပေါ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ကိုအလိုအလျောက်အချို့သောသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းမည်အကြောင်း အိုင်ပီ, browser ကိုအမျိုးအစား, သင့် access ကိုအချိန်။
သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကကြော်ငြာခြင်းရည်ရွယ်ချက်များ၊ အတွင်းပိုင်းကိန်းဂဏန်းများအရသင်အားပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသည်။ ဒေတာဘေ့စ်များကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့စွဲအရ၊
38 နှင့်အညီများနှင့်ဒေတာ, ဖိုင်တွေနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်းဇန်နဝါရီလ 78 17 ၏61978-ပညတ်တရား၏အောက်ပါသည်အသုံးပြုသူ access ကို, ချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း, ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့်အတိုက်အခံတစ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ။
ဒါလုပျက c ရန်သင့်တောင်းဆိုချက်ကိုပေးပို့ဖို့omme-un-pro.fr အီးမေးလ်က: tranquillus.france@comm-un-pro.fr
site ကိုအသုံးပြုသူပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်မ comme-un-pro.fr , အသုံးပြုသူရဲ့ပညာအတတ်မရှိဘဲထုတ်ဝေဖလှယ်, လွှဲပြောင်းတာဝန်ပေးသို့မဟုတ်အခြားသူများအားမည်သည့်ထောက်ခံမှုထံရောင်းချသည်။ ရွေးနှုတ်သော site ကိုသာယူဆချက် comme-un-pro.fr နှင့်သူ၏အခွင့်အရေးများကသတင်းအချက်အလက်များကို ၀ ယ်သူအား ၀ ယ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်အလှည့်အနေဖြင့်ဆိုဒ်၏အသုံးပြုသူနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းရန်တူညီသောတာ ၀ န်ရှိသည်။ comme-un-pro.fr ။
ဤအခြေအနေများဆိုက်ကို comme-un-pro.fr ပြင်သစ်ဥပဒေအရအုပ်ချုပ်နေကြသည်နှင့်ဤများ၏အနက်သို့မဟုတ်ကွပ်မျက်ရာမှပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်အငြင်းပွားမှုသို့မဟုတ်အငြင်းပွားမှုများပြင်သစ်တရားရုံးများ၏သီးသန့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်, ကပဲရစ်၏အရည်အချင်းတရားရုံးများ၏သီးသန့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုဖန်ဆင်းသည်။ အလားအလာတရားအခြေချများအတွက်ရည်ညွှန်းဘာသာစကား, ပြင်သစ်သည်။